About Us-Hunan Astiland Medical Technology sharraxaadda Co., Ltd.
Mashiinka saarista Cellulites
Mashiinka therapy Jirka
Mashiinka quruxda Laser
mashiinka ka saarida timaha
Mashiinka duudduub Anti
Mashiinka quruxda MFT
Mashiinka therapy Photodynamic
siyaada ah mashiinka Beauty
Astiland- A saaraha Chinese keentay qalabka bilicsanaanta of warshadaha quruxda caafimaadka, Waxaan nafteena sooco bixinta design,RD, saarka iyo iibinta for tiro balaadhan oo ah codsiyada sida hoos ku:
Saarista Joogtada ah ee timaha
Dib u simidda laser
Daaweynta Vascular nabar
Xanuun Daaweynta gargaarka
The farsamooyinka la xiriira ku lug Shockwave, IPL, Q-wareegay nd Laser yag, CO2 laser jajab, RF, HIFU, Cryolipolysis, Photodynamic iyo iwm.
Yuusan nidaamka iibka oo dhamaystiran, waxaan ku suuq qalabka daaweynta quruxda non-invasive la dhufto ee Mufti-functional ka badan 30 dal iyo ballaaran iyo sidoo kale-sharfay sida ay ammaanka, sahlan-shaqayn. Si heer-waxqabadka iyo tayo fiican.
"Tayada wax soo saarka waa ra'iisul" waa mabda'a shirkadda our. Waxaan shahaado by ISO 9000, ISO 13485, CE. hal kasta oo ka mid ah waxyaabaha aannu si adag soo saaray sida ay caadiga ah badbaadada caalamiga ah. Waxaa kor loogu qaado qanacsanaanta ka macaamiisha on our waxyaabaha line-full of caafimaad-isticmaalka, quruxda-daryeelka, guriga daryeelka iyo adeegga beauty.
Waxaan diiradda on cilmi joogto ah iyo hal-abuurnimo of technology bilicsanaanta caafimaad sare. Oo had iyo jeer qaado count badan oo shaqo QC &miyir macaamiisha u janjeedha. Waxaan sii on maalgashiga sii kordhaya on technology, si buuxda loogu isticmaalo faa'iidooyinka technology, loo hagaajiyo adeegga, oo si joogto ah la dhamaystiro qorshe tababarka shaqaalaha iyo hab niyad shirkadu ka, si ay u sameeyaan koox tayo tayo sare leh a, dhigaan aasaas adag xagga sayniska khayraadka cilmi-baarista iyo aadanaha ee goolka waara horumarinta mustaqbalka.
Karti waa arrinta ugu walaacsan in kooxda ka dib-iibka. Waxaan ujeedadoodu tahay si ay u xaliyaan dhibaatada waqti kooban gudihii ay aasaas ahaan tan iyo markii aan si sax ah u fahmaan waxa sumcadda ka dhigan noo. Waxaa naga riixo inay sameeyaan galuumaysiga ay tayadoodii our gacanta ku adeegga iyo tayada.
waxaa la abuuro wada, waxay wadaagaan wada!
Astiland" Waxaan rajaynaynaa in dadka ku raaxaysan doonaa faa'iidooyinka tiknolojiyada bilicsanaanta sare, taas oo isbedel iyo kalsooni inay soo kartaa. Waxaan ma aha kuwa xaqa shirkad, waxaan samayn sabab xurmada. Daacadnimo rajaynaynaa in aad gacanta ee gacanta ku shaqeeyaan, gaaro mustaqbalkiisa ciyaareed ka sii cajiib ah mustaqbalka of beeraha caafimaad bilicsanaanta, iyo berri ka fiican.
shahaado CE --- LVD
shahaado CE --- EMC
The liisanka Nooca II iibka qalabka caafimaadka
Import iyo ganacsiga dhoofinta xaq u
Shirkadda Our koox taageero farsamo si fiican u tababaran. All farsamo waxaa soo baxday oo si adag u tababaran waaxda farsamada our.
All of farsamo our ayaa si fiican u tababaran waaxda farsamada si loo hubiyo in our alaabta maraakiibta dhibaato la'aan.
1. Adeegga rakibaadda
Astiland waxay bixisaa adeeg lacag la'aan ah loo xirxiro ee iibsada cusub. farsamo deegaanka xiriiri doonaa iibsadaha for ballan loo xirxiro la iibsada. Ka sokow, waxaan sidoo kale ku siin rakibidda qalabka, adeega guddoominta iyo edbinta hawlgalka clinical.
*dalban oo kaliya in ay Astiland aagga caymiska ama adeeg ka ganacsada deegaanka.
2. Adeegga dayactirka
Haddii ay dhacdo in burburka qalabka, la xiriir farsamo maxaliga ah our si dhakhso ah si aad ballan u ah iyagoo raali ah. Waxaana hubaal ah in,
jawaab gudahood 8 saacadood
On-the-bar gudahood 48 saacadood.
24-adeega dayactirka saacadood
(Marka laga reebo fasaxyada statutory iyo xaalado gaar ah)
3. taageero tababarka Operation
In si ay u sii Dabcan wax ku ool ah ee daaweynta. Waxaan u baahanahay taageero ma aha oo kaliya ka hardware wanaagsan. Laakiin sidoo kale sax ah oo caqli badan hawlgallada caafimaad marka tartan asaasiga ah. Sida adeeg-koox adag, Waxaan si adag u rumaysan waayo-aragnimo iyo xirfad ah shaqaalaha caafimaadka waa muhiim.
Waxaan sii hagaajinta qalabka xirfadaha caafimaad oo ku dul xogta caafimaad by khubaro caalamka oo abaabulan. Oo waxay wadaagaan in macaamiisheena si ay u dareemaan waxyaabaha ka sii badan saxda ah iyo kalsooni in waxyaabaha our. Dhanka kale, waxaan danaynayaa jawaabihii aan ka helnay macmiilka. Waxaan soo koobaan doonaa su'aalaha oo dhan la kulmeen oo iyaga ka shaqeeyaan iyo macaamiisha wadaagaan.
4. Adeegga Cusbooneysiinta Qalabka
technology bilicsanaanta Medical si degdeg ah horumarinta, technology cusub ku soo dejin doonaa dalabka cusub ee suuqa. Waxaan soo bandhigi doonaa waxyaabaha cusub iyo hawlaha waqtiga, iyo in la siiyo hawlaha cusub ee adeegyada rakibaadda iyo tababarka. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale aqbalaan adeegyada ganacsiga ee.
Oo ay ku jiraan nuqul xayaysiis, boodhadhka, video, liisanka iyo qalab kale
Bixi hawlaha suuqa quruxdiisa oo ku haboon yahay Shiinaha, si ay u caawiyaan qurxinta dumarka si deg deg ah ay helaan suuqa bartilmaameedka
Taageero siiyaan howlaha suuqa ku salaysan isticmaalka waxa ka sameysan ah, si ay u caawiyaan gaaro natiijada ugu wanaagsan
website-, Wechat, Facebook, Youtube iyo riix kale news, dhexgalka, iwm.
Company hanuun shaqaalaha caafimaadka
Hospital taageero khabiir caafimaad oo degaanka
Qabo fasalka tababarka ee gobolka
Add: dhismaha 13, Xinggong Industry Park, Degmada Yuelu, Changsha, Hunan, Shiinaha
HOME / ALAABADA / NAGU SAABSAN / NEWS / NALA SOO XIRIIR
Copyright © Hunan Astiland Medical Technology sharraxaadda Co., Ltd.